Xaalada Biliqada ka socota Mareykanka oo lagu maxneeyety asoomaliya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xaalada Biliqada ka socota Mareykanka oo lagu maxneeyety asoomaliya
Magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxaa wali ka socda banaan baxyo rabshada wata oo looga soo horjeedo dilkii sargaal cadaan ah magaaladaasi ugu geestay nin madow ah aan hubeesneyn xiliga la dilayay.
Banaan baxyada ayaa kusii faafaya magaalada Minneapolis iyo magaalooyin kale, waxaana dadka banaan baxa dhigaya ay gubeen xarumo booliis waxa ay sidoo kale boobeen goobo badan oo ganacsi.
Barasaabka Minneapolis Tim Walz ayaa waxa ka socda magaaladaasi ku tilmaamay wax aan la aqbali karin, waxa uuna tilmaamay dhacdooyinka hada ka taagan Minneapolis in ay soo xasuusinayaan magaalooyinka Muqdisho iyo Bagdaad oo dhibaatooyin ka jiri jireen.
Booliiska magaalada Minneapolis iyo maamulka magaaladaasi ayaa ku guul dareestay wax ka qabashada banaan baxyada rabshadaha wata ee ka socda magaaladaasi , waxaana magaalada la geeyay ciidamo badan si ay xaalada wax uga qabtaan.
Previous articleSiyaasiyiin iyo aqoonyahanno ka tacsiyeeyey geeridii ugaaskii & nabadoonkii beesha Silcis & xasuuqii deegaanka Gololeey [BAYAAN]
Next articleMadaxweynaha Mareykanka oo ku gooday in la xasuuqi Doona Banaanbaxayasha haday Rabshadaha sii wadaani
Madaxweyne farmaajo oo si sharci daro ah lagu wado in uu...